Inona avy ireo lalao Panhellenic?
History & Culture Gresy & Sparta
CANEPHOROS - mitondra ny saribakoly boribory ahitana ireo fitaovana fanaovana sorona, ao anatin'ny dingan'ny Panathenea sy fety hafa. Manandratra ny sandriny izy mba hanohana ny harona mitondra ny loha. Sary ID: 817269 (1850). © NYPL Digital Gallery
Ny lalao Panhellenic, izay nanangana polisin'ny grika iray (tanàna, poleis ) tamin'ny hafa, dia hetsika ara-pivavahana sy fifaninanana ara-panatanjahan-tena ho an'ny atleta manan-talenta, amin'ny ankapobeny, mpanankarena amin'ny lafiny haingam-pandeha, tanjaka, fahamendrehana ary fiaretana. Sarah Pomeroy tany Gresy fahiny: Politika, sosialy ary kolontsaina (1999). Na dia eo aza ny fifaninanana eo amin'ny poleis ao amin'ny faritra arete (ny teny grika momba ny hatsaran-tarehy), ny fety efatra, ary ny fety dia mampiray ny tontolo ara-pinoana sy ara-kolontsaina ary mifandray amin'ny teny grika.
Ireo zava-nitranga manan-danja ireo dia natao nandritra ny efa-taona izay nomena anarana malaza amin'ny efatra. Nantsoina hoe Olympiad ny anaran'ny lalao olaimpika, izay natao tao Elis, ao amin'ny Peloponnese, avaratra-andrefan'i Sparta, mandritra ny dimy andro fahavaratra, indray mandeha isaky ny efa-taona. Tena nilaina ny fandriampahalemana mba hanentanana ny olona avy any Gresy ho an'ny Panhellenic [pan = rehetra; Hellenic = Grika], fa i Olympia mihitsy aza dia nanana fanandramana malaza nandritra ny faharetan'ny lalao. Ny teny grika ho an'ity dia ekecheiria .
Toerana misy ny lalao
Ny Lalao Olaimpika dia natao tao amin'ny toerana masin'ny Zeus Olympia tao Elis; ny Lalao Pythian dia natao tao Delphi; Ny Nemean, tao Argos, tao amin'ny fitoerana masin'i Nemea, nalaza noho ny asa izay namononan'i Heracles ny liona izay niafina ilay maherifo nanomboka teo; ary ny lalao ismiana, notazonina tao amin'ny "Isthmus" tany Korinto.
Ireo lalao efatra ireo dia lalao an-dabozia na satro-boninahitra satria nahazo fandresena na loko ny mpandresy. Ireo loka ireo dia volon-koditra oliva ( kotinos ) ho an'ireo mpandresy tamin'ny Olympika; laurel, satria ny fandresena indrindra no mifandray amin'i Apollo , ilay iray ao Delphi; Ny selera dia nanasitrana ireo mpandresy Nemean, ary ny mpandresy tamin'ny fandrobana tao Isthmus.
" Ny kotinos, ny satroboninahitra iray dia nanapaka hatrany ilay hazo oliva tranainy antsoina hoe kallistefanos (tsara ho satro-boninahitra) izay nitombo teo ankavanan'ny opisthodomos an'ny tempolin'i Zeus, dia nomena ho loka ho an'ireo mpandresy tamin'ny Lalao Olaimpika, manomboka amin'ny ny lalao voalohany natao tao Olympia tamin'ny 776 talohan'i JK mandrapahatongan'ny Lalao Olaimpika fahiny, mampiroborobo ny fifandonana sy ny filaminana eo amin'ny vahoaka. "
Ny hazo oliva ho ravaky ny Voninahitra
Ny Lalao Olaimpika dia nanome voninahitra ny Zeus Olympia; Ny lalao Pythian dia nanome voninahitra an'i Apollo; Ny lalao Nemean dia nanome voninahitra ny Zezo Nemean; ary ny Poseidon nomem-boninahitra ismma.
Pomeroy dia manomboka ny lalao ho 582 talohan'i JK ho an'ireo ao Delphi; 581, ho an'ny Istima; ary 573 ho an'ireo ao Argos. Ny fomban-drazana dia manomboka ny Lalao Olaimpika ho 776 talohan'i Kristy. Heverina fa afaka mandinika ny lalao efatra rehetra isika, fara-fahakeliny, mandra-pahatongan'ny lalao fandevenana atao hoe Achilles izay natao ho an'ny Patrocles / Patroclus malalany ao The Iliad , izay nomena an'i Homer. Ny tantaram-pirazanana dia miverimberina kokoa noho izany, ho an'ny vanim-potoana anganon'ireo mahery fo tahaka an'i Hercules (Heracles) sy Theseus.
Tsy mifanaraka amin'ny lalao an-tsarimihetsika - ary misy fahasamihafana marim-pototra, ny Great Panathenaea dia modely amin'izy ireo, araka ny voalazan'i Nancy Evans, ao amin'ny Civic Rites: Democracy and Religion in Ancient Athens (2010). Indray mandeha isan-taona dia nankalaza ny tsingerintaona nahaterahan'i Atena i Atena tamin'ny fetibe iray nandritra ny 4 andro, ary nahitana fifaninanana ara-panatanjahan-tena. Tamin'ny taona hafa, nisy fankalazana fohy. Nisy ekipa sy hetsika samihafa tao Panathenaea, ary ny menaka oliva manokana nataon'i Athena no loka. Nisy ihany koa ny laharana fanilo. Ny fampisehoana dia ny filaharambe sy ny sorona ara-pivavahana.
Fehezan-teny mifandraika amin'ny teny Grika sy ny Comédie
Ny fiandohan'ny fitroarana Ioniana
Ireo karazana fitsaboana grika tranainy
King Porus avy any Paurava
Nahoana i Aleksandra no nandrora an'i Persepolisy?
Aleksandra Lehibe ve Grika?
Fomba fanao mahazatra momba ny Kolontsaina Grika tranainy
7 Fahafantarana ny Governemanta Grika fahiny
Sary fampisehoana manokana Gallery: Dada ao MoMA - Berlin
Galileo Galilei sy ny Tantarany
Ny adiresin'ny fanjakana ao Mayville
Manoratra ny ampaham-potoana amin'ny Play Stage Script
Fisarahan-keloka amam-pianakaviana mifandray amin'ny heloka bevava bebe kokoa
Fanontaniana amin'ny teny anglisy
Inona avy ireo singa diatomika 7?
Inona no dikan'ny hoe Neptune Square Satin?
Izay tena hita eny amin'ny faritra lavitra indrindra amin'ny volana
5 Ireo Zavatra Mahaliana Momba Ny Fitaovam-piadiana Medici
¿Puedo viajar una fazería del United States con visa y pendiente o aprobada?
Ny vanim-potoana Peretsy (300-250 tapitrisa eo ho eo)
Ahoana no hananganana fanamelohana miaraka amin'ny mpangataka?
Top Songs amin'ny Casting Crowns
Fampidirana amin'ny Medium Acrylic ho an'ny sary hosodoko
Ahoana ny famerenana an'i Kelvin ho an'ny Celsius mena
8 Hevitra ho an'ny fandaminan-tena ho an'ny sekoly
Ireo tarehin-javatra sy tarehimarika hita tao amin'ny SUNY Albany
Ady Napaly: Battle of Tolentino